တပ်မ ၃၃ သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသည့် ပညာရေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ မအေးနန္ဒာစိုး ပျောက်ဆုံးနေ - Myanmar Pressphoto Agency
ABDSU All Burma Federation of Student Unions Arrest AyeNandarSoe MPA Myanmar Politics SagaingRegion Student
Politics November 3, 2021 ·0Comment
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က စစ်ကိုင်းပညာရေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဌ ဖြစ်သူ မအေးနန္ဒစိုးကို စစ်ကိုင်းတိုင်း အတွင်းရှိ တပ်မ ၃၃ သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးနောက် တစ်လခွဲခန့် ကြာသည်အထိ အဆက်အသွယ် မရဘဲ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။
မအေးန္ဒာစိုးကို ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးပြီးနောက် တပ်မ၃၃သို့ ပို့ဆောင်လိုက် ကြောင်း နောက်ဆုံးသိရှိရပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ သူမမည်သည့်နေရာ၌‌ ရှိနေသည်ကို သိရှိရခြင်းမရှိသေး ကြောင်း သိရသည်။
“သူက အမျိုးသမီးဆိုပေမယ့် ရဲရင့်တဲ့တက်ကြွတဲ့ စိတ်လည်း ရှိတယ်။ မဟုတ်မခံပုံစံမျိုးလည်း ရှိတော့ ပိုပြီးတော့ စစ်ကြောရေးမှာ စိုးရိမ်တယ်။ အခုလိုအချိန်ထိ အဆက်အသွယ်မရတာ တော်တော်အန္တရာယ်များတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ထိရောက်နေပြီဗျ” ဟု ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
မအေးနန္ဒစိုးသည် စစ်ကိုင်းပညာရေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ)၏ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။
မအေးနန္ဒာစိုးသည် မန္တလေးမှ စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်တစ်ခုသို့ သွားရာတွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်၌ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် လက်ရှိအချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူ့မိသားစုက အဆက်အသွယ်မရတော့ ပိုပြီးစိတ်ပူတာပေါ့။ မိခင်အဖွဲ့စည်းကိုလည်း စုံစမ်းဖို့ အကူအညီ တောင်းတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်း စုံစမ်းပေးဖို့ ခဏခဏပြောပါတယ် “ဟု ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး တော်လှန်လှုပ်ရှား သူများကိုဖမ်းဆီးပြီး စစ်ကြောရေးစခန်းများသို့ ပို့‌ဆောင်ပြီး နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် အကြမ်းဖက် နှိပ်စက်မေးမြန်းလေ့ရှိသည်။
ယင်းသို့နှိပ်စက် မေးမြန်းရာတွင် သေဆုံးခဲ့မှုများ ရှိခဲ့သဖြင့် မအေးနန္ဒာစိုးအတွက် အသက်အန္တရာယ်ပင် စိုးရိမ်ရလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်း ပညာရေး တက္ကသိုလ် စတုတ္ထနှစ်ကျောင်းသူ မအေးနန္ဒာစိုးသည် စစ်ကိုင်းဘက်အဝင် စစ်‌ဆေး ရေးဂိတ်တွင် အရပ်ဝတ်များက မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မအေးနန္ဒာစိုးကိုမည်သည့်နေရာ၌ ဖမ်းဆီးထားသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှာ တာဝန်ရှိသူများ ထံသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း တစ်စုံတရာတုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ အရ နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်နေ့အထိ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ပြည်သူပေါင်း ၉၆၀၀ကျော်ကို ဖမ်းဆီးထားပြီး လူပေါင်း၁၂၀၀ကျော်ကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
#ဗကသ #အေးနန္ဒာစိုး #ဖမ်းဆီးခံရ #အဆက်အသွယ်မရ #MPA
Ma Aye Nandar Soe, Chairperson of University of Education Student Union, who was Taken to Brigade 33 Gone Missing
After being taken to brigade 33 of the terrorist military within Sagaing region, Ma Aye Nandar Soe, chairperson of the University of Education Student Union has not been heard from foramonth andahalf and has gone missing.
Ma Aye Nandar Soe was arrested on September 19 and was last learned to have been sent to brigade 33. Until present, nothing is known about where she is.
“Thoughawoman, she hasabold, active heart. As she’satype of person who doesn’t stand what’s wrong, it’s more worrying. No contact has been made till now, so it’s now inaseriously dangerous situation”, said an information officer from ABFSU.
Ma Aye Nandar Soe is the chairperson of Sagaing University of Education Student Union and alsoamember of the All Burma Federation of Student Unions (ABFSU).
She was arrested atacheck point when she was going to another township within Sagaing region and no contact has been received since.
“Her family is even more worried as no contact has been received. The mother organization has also been requested to help investigate. The ABFSU is also repeatedly told to help investigate”, said the information officer.
The terrorist military is arresting anti-military dictatorship revolutionary activists, sending them to interrogation camps and has usually tortured them in various ways.
There have been deaths in those tortured interrogations and it’s worrying for the life of Ma Aye Nandar Soe.
The fourth year student of Sagaing University of Education was arrested by those on casual wears after checking her NRC atacheck point at the entrance into Sagaing.
Although the terrorist military officials were contacted about where Ma Aye Nandar Soe is kept, no response was received.
According to the report of the Assistance Association for Political Prisoners as of November 2, the terrorist military has arrested over 9600 civilians and killed over 1200 in various methods.
#ABFSU #AyeNandaSoe #Arrested #NoContact #MPA